အလှူတခု ဖြစ်မြောက်သွားပါပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အလှူတခု ဖြစ်မြောက်သွားပါပြီ။
Posted by ဆူး on Aug 23, 2011 in My Dear Diary | 46 comments
ဆူး စိတ်ကူး အလှူတခု ဖြစ်မြောက်ပြီ
အားလုံးကို အသိပေး ကြေညာတဲ့ သဘောနဲ့ ပိုစ်တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလည်း ၁သိန်းပြည့်ဖို့ ရာဂဏန်း လိုနေပါသေးတယ်။
တနေ့က သဂျီးဆီကနေ အီးမေး လာပါတယ် ၁သိန်း ကို အားတဲ့ ရက် လွဲပေးမယ် ဆိုပြီး အကြောင်းကြားစာ လာခဲ့သလို လွဲပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆူး လက်ထဲ ရရှိတဲ့ ၁သိန်း တိတိ ကို.. ကျေးဇူးကြီးမားလှတဲ့ မွေးမိခင်ကြီးကို ကိုယ်ပိုင် လုပ်အားခ သဘောမျိုး ဖြစ်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်။
၁သိန်း အတွက် ၁နှစ်ကျော် မက အချိန်ပေးပြီးတော့ ပိုစ်ပေါင်း ၃၄၀ ရေးခဲ့ပြီး ကွန်မန်း အခုရေပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် ရေးသားခဲ့ရပါတယ်။
စပြီး ၀င်ရေးတုန်းကတော့ အပျော်သဘောနဲ့ ရေးသားခဲ့ပေမဲ့ တက်လာတဲ့ ပွိုင့်တွေကို ကြည့်ပြီး သဘောကျ ပီတိ ဖြစ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
နောက်တော့ တော့တန်း ထဲမှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်လာတော့ ရတော့မယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲ။
ပုံမှန် ပိုစ်လေးတွေ ရေးသားပြီး ကွန်မန်းလေးတွေ ပေးနေမယ် ဆိုရင် ၁သိန်း ဆိုတဲ့ ပမာဏ ကို ရောက်သွားကြမှာပါ။
၁သိန်း ဆိုတဲ့ ပမာဏ မများပေမဲ့ တက်နေတဲ့ အမှတ်တွေကို ကြည့်ပြီး လုပ်နိုင်စွမ်းရည် ဒီလောက် ရှိပါလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တော့ ပီတိ ဖြစ်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ပိုက်ဆံ ၁သိန်း လက်ခံရရှိတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် ပိုက်ဆံ စစ်စစ် နဲ့ မိခင်ကြီးကိုလည်း ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်။
ရည်ရွယ်ချက်တော့ အလှူတခု ဖြစ်ချင်လို့ပါပဲ..
အမေ ကတော့ ထို ပိုက်ဆံ ၁သိန်း လိုအပ်နေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူအတွက် သိတတ်မှု ဆိုတဲ့ အရာလေး လိုအပ်နေတာကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။
လက်ခံရရှိတဲ့ ၁သိန်းကို အမေ ကို ကန်တော့ပြီး ယနေ့ ဇီဝိတ ဒါန ဆေးရုံ န၀ကမ္မ အလှူငွေ အဖြစ် လှူဒါန်း ခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်း ဖြစ်စေ သီလရှင် ဖြစ်စေ လူဖြစ်စေ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပြုနိုင်အောင် လိုရာသုံးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရုံကိုတော့ မိခင်ကြီးနဲ့ အတူ သွားပြီးတော့ အမေ့ နာမည်နဲ့ လှူပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လုပ်ခဲ့တာကို ကျေနပ်အားရရှိလှ သလို အများကိုလည်း သိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြီး ပိုစ် အဖြစ်တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁သိန်း ကို အလှူလုပ်ချင်တာကော မိဘ ကျေးဇူးသိတတ်တာကော တချက်ခုပ် ၂ချက်ပြတ် လုပ်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ခဲ့ပါပြီ။
အားလုံးပဲ ကျန်းမာ ရွင်လန်းကြပါစေ။
ကောင်းသော လိုရာ ဆန္ဒပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
ကျွန်ုပ် ရဲ့ မိခင်ကြီးကို အမှူးထားပြီး လှူဒါန်းတဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေကိုလည်း ရွာသားများ သိပါစေ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါစေ ထပ်တူထပ်မျှ အကျိုးရကြပါစေလို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
သူကြီး ဆီ က ၁သိန်း ဆိုတာ ဆူးရဲ့ စာမူခ ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေ နဲ့မာတာ မိခင် ကို ဦးဦးဖျားဖျား ကန်တော့ တယ် ဆိုတော့
ရှေ့ ရှောက် ဆူးတစ်ယောက်
စီးပွားလာဘ်လာဘ တွေ ပေါများဦးမှာ
ဖောကြီး (FR) ရဲ့ စကားကို ငှားသုံးပါမယ်
ဆူးနောက်က တန်းစီနေတဲ့သူတွေလည်း အမြန်ရပါစေ။
ဦးကြောင်ကြီးက ရှေ့ကပြေးထားလို့ ကြုံးဝါးဘူးတယ်နော၊
သာဓု သာဓု သာဓု .
သဂျီးလဲ ဒီထက်မက အလျုရှင်တွေရရှိနိုင်ပါစေ
Foreign Resident လဲထပ်လှုနိုင်ပါစေ
၅နှစ်သက်တန်းရှိနေတဲ့.. အမေရိက အခြေစိုက် ပုံနှိပ်မီဒီယာ.. မန္တလေးဂေဇက်က..အယ်ဒီတာချုပ်ကိုယ်တိုင်.. တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်ပေးတဲ့.. ဆုကြေးငွေပါ..။
လူသိန်းချီဖတ်နေတဲ့..၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ… တနှစ်ကျော်..တစိုက်မတ်မတ်.. ရေးသားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်.. “ဆူး” ကလောင်အမည်ဟာလည်း.. သမိုင်းမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ငွေကျပ်၁သိန်းမကထိုက်တန်တဲ့.. ကလောင်အမည်ကလေးတခုပါ…။ ကိုယ့်Identity လေးပေါ့..။
သူကြီး – MG စထောင်ကတဲက တစ်သိန်းရတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲ သိလို့ရမလားခင်ဗျာ
အခုအချိန်ထိ စုစုပေါင်း ငါးယောက်ရှိပါပြီ။ ပထမဦးဆုံးက ဦးခိုင်၊ ဒုတိယက သူ့မိန်းမဒေါ်ကြိုင်၊ တတိယက သမီးမနိုင်၊ စတုတ္ထက သားမောင်ပိုင်၊ နောက်ဆုံးပဉ္စမချိတ်သူကတော့ ဖွားဆူး (တရုတ်အမည် ဦးတည်ဆန်) ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား….။
“Foreign Resident” လဲထပ်လှုနိုင်ပါစေ Ooppppp…
OK… OK… I will donate again, but, not now, very soon.
သာဓု သာဓု သာဓု ဗျာ
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြည်နူးစွာဖြင့် ခေါ်ဆိုပါတယ်
အထူးသဖြင့် မိဘကို ကျေးဇူးသိတတ်မှူ့ကို ပိုပြီး လေးစားမိပါတယ်။
ဆူး ရေ- အားလုံးနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကုသိုလ်တွေ အထပ်ထပ်ရအောင်လို့ ဥာဏ်ယှဉ်ပြီး လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့်ဆင့်ရော (သဂျီး၊ FR၊ ဆူးရဲ့မေမေ၊ဆူး)၊ ထပ်ဆင့်၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်သူအပေါင်းရော ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒ မှန်သမျှ ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် နော်။
FR လိုတောင် မလှူနိုင်သေးတဲ့လူ (ကိုယ်ပါပါတယ်။) အများကြီးပါ။
ရွှေနီက FR ကို မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ ရေးလိုက်တာ ဖြစ်မှာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်မမ။ ရွှေနီကလောလောဆယ်၁၀၉-၁၁၀ ဖြစ်နေတာ ။မလှုနိုင်သေးလို့ အလှုရှင်အမည်ကိုမှတ်တမ်းထက်တင်လိုက်တာ ။
စာရေးဆရာ မောင်မိုးညိုတောင် ကျန်သွားတယ် ညကနာမည်ကို စဉ်းစားလို့မရလို့ ။ဒါပေမဲ့ အခုထပ်လှုမယ်ဆိုလို့ ပိုဝမ်းသာသွားတယ် သာဓုပါရှင်
ပို့စ် ၃၄၀ကျော် ကွန်မန့် ၅၀၀၀ ကျော်ဆိုတော့ နဲတဲ့ အားထုတ်မှုမဟုတ်ဘူး။
သူဂျီးပေးတဲ့ တစ်သိန်းရဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်တာဘဲနော်။
တန်းဖိုးရှိစွာရထားတဲ့ အရာကို တန်းဖိုးရှိအောင် အသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို အမျှလဲ ဝေလိုက်တယ်။ အမျှဝေလိုက်တော့ သာဓုခေါ်တဲ့သူတိုင်း (တကယ် စိတ်ပါလက်ပါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခေါ်တဲ့သူတိုင်း) ထပ်တူထပ်မှ ရပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ကွန်ပြူတာ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ဗီစီဒီ ဒီဗီဒီတွေကို ကော်ပီကူးလိုက်သလိုဘဲ မူရင်းလဲ လျှော့မသွားဘူး။ ကူးတဲ့သူလဲရသွားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမျှဝေခြင်း သာဓုခေါ်ခြင်းကို အဲလိုသဘောက်ပေါက်ပါတယ်။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို အမျှလဲ ဝေလိုက်တယ်။ အမျှဝေလိုက်တော့ သာဓုခေါ်တဲ့သူတိုင်း (တကယ် စိတ်ပါလက်ပါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခေါ်တဲ့သူတိုင်း) ထပ်တူထပ်မျှ ရပါတယ်။
တစ်သိန်းရရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်လို့ပြောထားလို့ ပိုက်ဆံကုန်ပြီဆိုပြီး ကြေညာတာပေါ့လေ …
အလှူဒါနအတွက် ၀မ်းသာအားရ သာဓုခေါ်ပါတယ် ..
သာဓု .. သာဓု .. သာဓု
လှူလိုက်ပြီဆိုတော့ သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုပေးယုံသာ ရှိပေသည်.ပေါ့
သူကြီးနှင့်တကွ..ဖောကြီးတို့ …အလှူရှင် ကလေးမတို့ …ဆော်ကြည်ထီပေါက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေသား..
အဘတို့ တော့ တစ်သိန်းပြည့်အောင် ဆယ်နှစ်လောက် အားထုတ်ရပေဦးမယ်မို့ ..
အန်တီဆူးနဲ့ပေါင်းပြီး အလှူများလုပ်ရမလားလို့ သူ့ချည်းကိုယ်လွတ်ရုန်း ထွက်သွားပါရောလား…။ လူတွေလူတွေ ကြောင်လောက်တောင် မိတ်ဆွေအပေါင်းအဖော်ကို သတိမရကြ….
သာဓုပါ မမဆူးရယ် အားလည်းကျမိပါတယ်
ကိုယ်တိုင်းလည်း ဗဟုသုတနည်းတော. သိပ်လည်းမရေးတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် အတွေ.ကြုံလည်း နုသေးလို.
မမဆူးကို ၀င်မန်းရင် ကိုယ်.ပွိုင်.လေးကြည်.မိပါတယ် Points: 13430 Kyats တဲ.
အများကြီးကျိုးစားဖို. လိုနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ
အမှန်တိုင်း ၀န်ခံရရင် ပိုက်ဆံတစ်သိန်းပြည်.ဖို.ဆိုပြီး အားထုတ်မရေးဖူးဘူး
အခုလို အလှူလုပ်တဲ.မမဆူးက ပို.စ်တင်ပေးတော.လည်း တစ်သိန်းပြည်.အောင် အမြန်ရေးပြီး
အလှူဖြစ်ဖြစ် အကျိုးရှိမဲ.ဟာလေး တစ်ခုလောက် လုပ်ချင်တဲ.အသိကလေး ကိန်းအောင်းလာတာတော.
သေချာပါတယ် သူကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကံဆိုးချင်တော. အနော်တို.ကျတော. စာမူခတွေ
မန်းခတွေက လျှော.ကျကုန်ပြီ သူကြီးလည်း စီးပွားရေးပျက်ကပ် ဆိုဒ်နေလို.လားမသိပါဘူး စတာနော် သူကြီး
ဆူးရေ တစ်သိန်းရရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ
အခုတော့ အမေ့အတွက် အလှူလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝယ်မကျွေးခိုင်းတော့ပါဘူး
သာဓု…သာဓု …. သာဓု ….
ဘွားဆူးအလှူမှာ ဘွားဆူးတင်မက ဘွားဆူးအမေရော သဂျီးရော ကုသိုလ်ရသွားပါရဲ့
ပြီးတော့ သဂျီးဆီ အလှူငွေထည့်ပေးသူတွေရောပေ့ါ
ဆူးမမ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ ရတဲ့ ပိုက်ဆံကို အမေကိုလှူတာ မှန်ကန်မွန်မြတ်ပါတယ်
အမေပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ကျွေးတာလဲ မှန်ကန်မွန်မြတ်ပါတယ်
တနှစ်နီးနီးရေးတာ တစ်သောင်းမပြည့်သေးဘူး ဆိုတော့ နောင် ၁၀ နှစ်လောက်ဆို ကျွန်တော်လဲ အမေ့လှူနိုင်မယ် ထင်ပါတယ် ( အမေ နောင် ၁၀နှစ် ကျန်းကျန်းမာမာ နေဦးနော်)
မွန်မြတ်တဲ့ အလှူ ဒါနအတွက် ရော ပို့ တသိန်းပြည့် အတွက် ပါ congratulations ပါ ဆူး…..။
ဖတ်ပြီး ကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ် အစ်မရေ … သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံနဲ့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းမျိုးပါပဲ … ။
သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပြီး ကုသိုလ်ပွားလိုက်ရပါတယ် ။
တစ်သိန်းဆိုတဲ့ပမာဏက ဘာမှသိပ်မရှိပေမယ့် ကို်ယ့်ရဲ့လုပ်အားခ၊ ချွေးနည်းစာ၊ နောက် အချိန်တွေ ငွေတွေ ပေးခဲ့ရပေမယ့် ကိုယ်ရေးသားတာတွေ လာရောက် ကော့မန့်ပေးတာတွေဟာ အလွန်တရာမှ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲရှိတာ ချရေးလိုက်တဲ့အခါ စိတ်တူတာတွေ၊ ငြင်းခုန်တာတွေ၊ အပြုသဘောဝေဖန်တာတွေ၊ နောက် အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတိုးတာတွေကတော့ ကိုယ့်အတွက် အမြတ်ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူးရေ.. ဆူးရဲ့ကောင်းမှုအတွက် သာဓုခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်…….
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ကော့မန့်တစ်လုံးဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် အားဆေးတစ်ခွက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရွာသား၊ရွာသူအပေါင်းတို့ ဒီအဒေါ်ကြီးက သူ့အိမ်မှာ တောက်တိုမယ်ရ အလုပ်လေး ၀ိုင်းကူလုပ်ပြီး ထိုင်စားလာတဲ့အချိန်ကြာပါပြီ.. အခုမှ ချွေးနဲစာ( ချွေးနဲနဲပဲထွက်ခြင်း)နဲ့ မိခင်ကြီးကို ကန်တော့ တယ်ဆိုတော့ သာဓု .သာဓု .သာဓု ခေါ်ပါတယ်..
သူကြီးဆိုသော ဦးကြီးခိုင် ခင်ဗျား ကျွန်တော်ကိုလဲ ပွိုင့်လေး ၉၀၀၀၀ ကျော်လောက်လိုတာ ငွေကြိုထုတ်ပေးလို့ ရမလားခင်ဗျ…သိပါရစေ ….
အဲဒီကိစ္စမျိုးကို သူကြီးကတော်ဆီအရင်ဝင်ရတယ် တညင်သားရဲ့..
ဆူးရေ စာ ရေးလို့ ရတဲ့ တစ်သိန်း အတွက် CONGRATULATIONS ။ တစ်သိန်းကို အမေ အတွက် အလှူ လုပ်ပေး တဲ့အတွက် သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ပါတယ် ။ဆူးအတွက်ဝမ်းသာပါတယ် ။ ခြောက်လ ကို ပွိုင် နှစ်ရာ ကျော်ဆို တော့ တစ်သိန်း ရောက် ဖို့က အင်း….. ။ တနေ့တလံ ပုဂံဘယ်မရွေ့ ပေါ့ ။ စိတ်မပျက်ပါဘူး ရသလောက်ပေါ့ ။ :D
ကွန်မန့် ၁၅၀၀ ကျော်နဲ့ ပို့စ် ၁၇၀ ကျော်ရေးထားတာ ပွိုင့် ၃၆၀၀၀ ပဲရထားသေးတယ် … အချိန် ၉ လ ကုန်ခဲ့တယ် … တစ်သိန်းပြည့်ဖို့ဆိုရင် နောက် ၂ နှစ်လောက် စောင့်ရအုန်းမယ် …
ဆူး ရေ မင်္ဂလာရှိလိုက်တာ။ထပ်တူ ထပ်မျှဝမ်းသာရပါတယ်။ခုလို မျိုး ကိုယ့်ချွေးနည်းစာလေး နဲ့ ပြုရတဲ့ ကုသိုလ်က ပိုမွန်မြတ်တာပေါ့။ ဆူးကို အားကျလိုက်တာနော်။ ပို့ စ်ပေါင်း ၃၄၀ ဆိုတာ နည်းတာမှမဟုတ်တာနော့။ကျွန်မတို့ လဲကြိုးစားပြီး ရေးသွားဖို့ ကတိပြုပါတယ်
ကောင်းလေစွ… ကောင်းလေစွ… ကောင်းလေစွ…
ဆူးရဲ့ အလှူကို ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ…
ပိုက်ဆံ ၁ သိန်းရတာကို မုဒိသာ ပွားပါတယ်…
ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေကိုပေးပြီး ခံစားရေးဖွဲ့ခဲ့ရတာဆိုတော့ ကျနော်ဆူးရဲ့ ဇွဲကိုချီးကျူးသလို ရေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသားအတွက်လည်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်…
ရှေ့လျောက် ၀မ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဒီလိုမျိုးအလှူလေးတွေ ဆက်ကာဆက်ကာ ပြုနိုင်ပါစေဗျာ………..
ညအိပ်ခါနီး ၁၂နာရီကျော်မှ ပိုစ်ကို တင်လိုက်တာပါ။
ညတညတာ နဲ့ မနက် တပိုင်း ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ကွန်မန်း ၃၂ ခု ရနေတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
အားလုံး ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ပြု ရေးသားခဲ့တာကို ဖတ်ရတဲ့ အခါ.. စိတ်ထဲ အလွန်ဝမ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ်။ အမှန်တော့ ၁နှစ်ကျော် အချိန်ပေးပြီး ရေးသားခဲ့သလို ရန်ပွဲတွေ အတိုက်အခံတွေ အများကြီး ဖြစ်လာခဲ့တာ တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေ ကို စိတ်ကုန်လာလို့ ၁သိန်းပြည့်ရင် စာရေးတာ နားတော့မယ်လို့ တွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ တိတ်တဆိတ် ထွက်ခွာသွားချင်လို့ ကွန်မန်းတွေ ပိုစ်တွေ တင်တာ တမင်ကျဲအောင် လက်အရှိန်ကို လျော့ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၁သိန်းပြည့်ဖို့ တော်တော် ကြာသွားခဲ့တာပါ။ အာရုံနှစ်ပြီး သိပ်မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ အခုလို အားပေးတဲ့ ကွန်မန်းတွေကို ဖတ်တော့ ဆူး တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ကွန်မန်းတွေ ရလို့ ၀မ်းသာခဲ့ပါတယ်။ ပစ်ထားတော့မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ၁သိန်း မပြည့်သေးလို့ မျှဉ်းဖြတ်တော့မယ် စိတ်ကူးထားမိတဲ့ အတွေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့ အတွေးဖြစ်မိတာပါ။ စာမူခေါ်တဲ့ ပိုစ်ကို ဖတ်မိတဲ့ အခါတုန်းကလည်း ထွက်သွားတော့မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးက တွေဝေ ခဲ့ပေမဲ့ အခုကတာ့ ပိုခိုင်မာ သွားတယ်။
အခါအားလျှော်စွာ ရေးမယ် အပြီးတော့ အဆက်မဖြတ်တော့ဘူး။
ကွန်မန်းပေးတဲ့ သူ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တသိန်းပြည့်ခါနီးမှ ရေးအားတွေကျသွားတော့ ဆူးတယောက်တော့ MG ကို တင်းနေပြီထင်တယ်လို့ ကျွန်တော်က တွေးနေမိတာ…။ point တွေကို လျှော့ပြီးရင်း လျှော့နေတဲ့ အတွက် တင်းမယ်ဆိုတင်းလောက်တယ်လေ…။ တသိန်းက ပြည့်တော့မယ် Point က တက်မလာ…..ဟုတ်တယ်ဟုတ်…။
အမရေ အဲလောက်တော့ မရိုးဆင်းပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်း ဆူးလို မွေးမေကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်လေ….။ သာဓုဗျာ..။
မွန်မြတ်တဲ့ငွေနဲ့ လှူတန်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဆူးရေ လုံးဝ အဆက်အသွယ်မဖြတ်ဘူးလို့ သိရလို့ ၀မ်းမြောက်မှု နှစ်ထပ်ကွမ်းပါနော်။
“အမှန်တော့ ၁နှစ်ကျော် အချိန်ပေးပြီး ရေးသားခဲ့သလို ရန်ပွဲတွေ အတိုက်အခံတွေ အများကြီး ဖြစ်လာခဲ့တာ တွေ့ကြုံခဲ့တာတွေ”
Never give up because of this.
Zwe hsu says:
တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလ ကျော်လွန်လာကြပေါ့။
ွှtop ten ရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ winne ဆိုတဲ့နာမည်လေးခါတိုင်းလိုမတွေ့ရတော့ … တမျိုးတော့ခံစားရသား .။
ဘာဘဲပြောပြော ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရမှုတွေမှာ သတိရစရာတွေဖြစ်နေမှာပါ။
ဘယ်နေရာ မဆို အချိန်တန်ရင် ဖယ်ပေးရစမြဲမို့ အချိန်စိရင်တော့ ဆင်းရမှာပါပဲ။
ရင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဆူး ဘဲသိမှာပါ၊
ရွာပြင်ကနေ ရွာထဲကို ထွက်လိုက်ဝင်လိုက် နေရင်း သာဓုခေါ်ဆိုသွားပါတယ်
အမျှများများပေးဝေကြပါ ဒါမှ ကျွတ်မှာလွတ်မှာ အဲ မဟုတ်ပါဘူး ရောကုန်ပီ … D
ဆူးရေ ၀မ်းသာပါတယ် စိတ်ဓာတ်ကို လည်း လေးစားပါတယ် ဆူးရဲ့ စာလေးတွေကို လည်း ဆက် ပြီးစောင့်မျှော်နေပါတယ် (သူကြီးကလည်း ကတိတည်သားပဲ )
ဆူးတယောက် ဆက်လက်ပြီး စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ မိဘကျေးဇူးကိုလည်း ဒီထက်မက ဆက်နိုင်ပါစေ ကွယ်…….